Ankehitriny, ny indostrian'ny fiompiana dia mivoatra hatrany ary manana ambaratonga iray amin'ny ankapobeny. Miampy ny fampitaovana ny fiompiana kisoa mandroso, ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fiompiana dia comprehensi ...
Androany, Shandong Hengyi Animal Husbandry Machinary Co., Ltd., izay manampahaizana manokana amin'ny famokarana fitaovana fiompiana kisoa, dia te-hilaza aminao ny karazana sy ny endrika rafitr'ireo trano kisoa. Andao handeha direc ...
Ny tranom-borona akoho dia ampiasaina betsaka kokoa amin'ny fiainantsika. Fantatrao ve ny fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny fitaovana fiompiana coop? Ny fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana dia misy contro mari-pana miteraka hafanana ...